မနကျဖွနျကရြောကျမညျ့ အမစေုမှေးနမှော သစ်စာဆိုပွီးအလှူတဈခုပွုလုပျခဲ့ကွတဲ့ ဟားငါးကောငျအဖှဲ့သားမြား - Khitamyin
June 18, 2021 Ko Khit Cele News 0
ဟားငါးကောငျလူရှငျတျောအဖှဲ့ကတော့ တျောလှနျရေးတိုကျပှဲမြားတှငျ တတျနိုငျတဲ့နရောကနေ ပါဝငျဆောငျရှကျဖို့အတှကျ လှတျမွောကျနယျမွတှေငျ စဈသငျတနျးတကျရောကျနကွေပွီ ဖွဈပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ လှုပျရှားမှုတှကေိုလညျး ပွညျသူတှသေိရှိကွစဖေို့ အမွဲလိုလို ဝမြှေပေးနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။ မကွာသေးခငျ မိနဈပိုငျးလောကျကလညျး လူရှငျတျောတိုငျးကြျောရဲ့ လူမှုကှနျယကျမှာ ကွညျနူးစရာသတငျးလေးတဈခု တငျထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကတော့ မနကျဖွနျမှာ ကရြောကျတော့မယျ့ အမစေုရဲ့မှေးနအေ့တှကျ မှနျမွတျတဲ့လကျဆောငျတဈခုပေးဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျကွတာ ဖွဈပါတယျ။ အမရေဲ့ မှေးနအေ့တှကျ သူတို့တဈဖှဲ့လုံး နှဈခြီသောကျခဲ့ကွတဲ့ အရကျကိုသစ်စာဆိုပွီး လှူလိုကျကွပွီ ဖွဈပါတယျ။ အမပွေနျလာမှ တောငျရှညျရငျဖုံး ပွနျဝတျပွီး စငျပျေါပွနျတကျမယျ့အကွောငျးကိုလညျး အခုလိုရေးသားဝမြှေထားတာ ဖွဈပါတယျ။
“မနကျဖွနျ အမေ့ မှေးနကေို့ သားတို့ အတကျနိုငျဆုံးအကောငျးဆုံးကွိုးစား စီစဉျထားတယျအမေ။သားတို့ အမပွေနျလာမှ တောငျရှညျရငျဖုံး ပွနျဝတျပွီး စငျပျေါ ပွနျတကျမယျအမေ . ………ဪ မလေို့ အမေ တိုးကြျော ၊ ပိုးလေး၊ ဝိုငျးကြျော၊ပွညျကြျော ၊ တို့ နှဈ နဲ့ ခြီသောကျခဲ့တဲ့ အရကျကိုအမေ့ ကို မှေး နေ့ လကျဆောငျအဖွဈ ၊
သစ်စာဆို လှူလိုကျကွပွီအမေ ၊ သားလညျးဘီယာ မသောကျတော့ဘူးနျော အမေ” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ။ပရိသတျတှကေလညျး ဟားငါးကောငျအဖှဲ့သားတှပေေးတဲ့ မှေးနလေ့ကျဆောငျလေးကွောငျ့ မကျြရညျကမြိတဲ့အထိ ကွညျနူးရကွောငျး မှတျခကျြပေးရေးသားထားကွတာ ဖွဈပါတယျ။ အားလုံးလညျး အပြျောတှကေူးစကျသှားကွစဖေို့ ဒီသတငျးလေးကို တငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျ။
ဟားငါးကောင်လူရွှင်တော်အဖွဲ့ကတော့ တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲများတွင် တတ်နိုင်တဲ့နေရာကနေ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် လွတ်မြောက်နယ်မြေတွင် စစ်သင်တန်းတက်ရောက်နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း ပြည်သူတွေသိရှိကြစေဖို့ အမြဲလိုလို ဝေမျှပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင် မိနစ်ပိုင်းလောက်ကလည်း လူရွှင်တော်တိုင်းကျော်ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာ ကြည်နူးစရာသတင်းလေးတစ်ခု တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ မနက်ဖြန်မှာ ကျရောက်တော့မယ့် အမေစုရဲ့မွေးနေ့အတွက် မွန်မြတ်တဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေ့ရဲ့ မွေးနေ့အတွက် သူတို့တစ်ဖွဲ့လုံး နှစ်ချီသောက်ခဲ့ကြတဲ့ အရက်ကိုသစ္စာဆိုပြီး လှူလိုက်ကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေပြန်လာမှ တောင်ရှည်ရင်ဖုံး ပြန်ဝတ်ပြီး စင်ပေါ်ပြန်တက်မယ့်အကြောင်းကိုလည်း အခုလိုရေးသားဝေမျှထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
“မနက်ဖြန် အမေ့ မွေးနေ့ကို သားတို့ အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးကြိုးစား စီစဉ်ထားတယ်အမေ။သားတို့ အမေပြန်လာမှ တောင်ရှည်ရင်ဖုံး ပြန်ဝတ်ပြီး စင်ပေါ် ပြန်တက်မယ်အမေ . ………ဪ မေ့လို့ အမေ တိုးကျော် ၊ ပိုးလေး၊ ဝိုင်းကျော်၊ပြည်ကျော် ၊ တို့ နှစ် နဲ့ ချီသောက်ခဲ့တဲ့ အရက်ကိုအမေ့ ကို မွေး နေ့ လက်ဆောင်အဖြစ် ၊
သစ္စာဆို လှူလိုက်ကြပြီအမေ ၊ သားလည်းဘီယာ မသောက်တော့ဘူးနော် အမေ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်း ဟားငါးကောင်အဖွဲ့သားတွေပေးတဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးကြောင့် မျက်ရည်ကျမိတဲ့အထိ ကြည်နူးရကြောင်း မှတ်ချက်ပေးရေးသားထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးလည်း အပျော်တွေကူးစက်သွားကြစေဖို့ ဒီသတင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်။
Crd-Taingkyaw’s Facebook Account